Agaasimaha guud ee W/Warfaafinta oo ummada uga tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay | Radio Muqdisho	Sunday, May 26th, 2013	Bogga Hore
Agaasimaha guud ee W/Warfaafinta oo ummada uga tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay
Published on September 21, 2012 by Mowliid · 2 Comments · 1,422 views
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Boostada iyo isgaarsiinta ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelada iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii shalay argagixisadu ku xasuuqday Muqdisho.
Agaasimaha guud ee wasaaradda mudane C/risaaq Cali Yuusuf Bahlaawi oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeeyay dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay, wuxuuna si gaar ah tacsi ugu diray ehelada iyo qoysaski ay ka geeriyoodeen Sadexdii wariye ee ku nafweysay qaraxyadaasi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu agaasimuhu xusay in arrintani aysan wasaaradda ka hakin doonin howlihii ay u heysay bulshada Soomaaliyeed islamarkaana ay warbaahinta qaranku sii dardar gelindoonto adeegyada ay bulshada u heyso.
sidoo kale agaasimuhu wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in kooxda Shabaab ee sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi lala xisaabtami doono sharcigana la horkeenidoona,isagoo intii ku dhimatay u rajeeyay in naxariistii Janno uu Alle ka waraabiyo intii ku dhaawacantay uu bogsiiyo.
maxamuud omar mohamed says:	September 21, 2012 at 3:10 pm	inaalilahi wainalilahi rajucun alahunaxaristo dhaman intii kudhimatay masibada arxanlawayasha sabar iyo iman allah hanaga siyo dhaman musliminta melkastoy jogan inalilahi wainalilahi rajucuun madhinte waa allaah
Reply »	wadani says:	September 21, 2012 at 11:58 pm	waxaa tihiin geesiyaal mudan in garabkooda la joog dowlada somaaliyeed wiilashaan qoysaskooda ha daryeesho